besafe – OOTDMYANMAR
FACE MASKS WITH BREATHING VALVES CAN’T PREVENT THE SPREAD OF COVID-19
No Comments on FACE MASKS WITH BREATHING VALVES CAN’T PREVENT THE SPREAD OF COVID-19
လေရှူပေါက်ပါတဲ့ mask တွေက COVID 19 ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ
Masks, face shields, and alcohol are some necessities we need ever since the #covid19 affected the world.
Mask တွေ face shield တွေနဲ့ အရက်ပြန်တွေက ကမ္ဘာမှာ ကိုဗစ် 19 စတင်ပျံ့နှံ့စဉ်ကတည်းက လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Masks can be the very essential and perhaps the most important in preventing transmission of the virus.
Mask တွေက အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်ပြီး ဗိုင်းရပ်ပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းအတွက် ကာကွယ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပါတယ်။
And just like any #ootd masks comes in different design, color, and types. But did you know that the ones with breathing valves, are not really efficient in keeping you protected.
အရောင်၊ ဒီဇိုင်း ၊ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ #ootd mask တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်ရှူပေါက်ပါဝင်တဲ့ mask တွေက ရောဂါပိုးကိုကာကွယ်ရာမှ ထင်သလောက် အကျိုးမရှိပါဘူး။
မြင်မြင်ချင်းမှာတော့ လေရှူပေါက်ပါတဲ့ mask တွေက အခြား ခွဲစိတ်ခန်းသုံး mask တွေနဲ့ အဝတ် mask တွေထက် အမြင်လှတယ်ဆိုပေမယ့် CVOID -19 ကို ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ ထိရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေက mask မှာ တွဲပါတဲ့ သေးငယ်တဲ့ကြားခံဧရိယာကိုဖြတ်သန်းသွားရတဲ့အတွက် အသက်ရှူရမှာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြင်ပက ရောဂါပိုးမွှားတွေကိုလည်း အလွယ်တကူဖိတ်ခေါ်နေသလို ဖြစ်စေမှာပါ။
The whole point ofamask is not only to avoid inhaling particles that may have the virus, but it’s also to prevent yourself from releasing particles from your mouth and nose into the air in case you’re an asymptomatic carrier. A face mask withabreathing valve defeats one of the main purposes of wearingamask in the first place—to protect others from getting infected, too.
Mask တပ်ခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ပြင်ပက ရောဂါပိုးပါတဲ့လေတွေကို မရှူရှိုက်မိဖို့အပြင် ကိုယ်က ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူဖြစ်နေခဲ့ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း စတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါကနေတဆင့် ပြင်ပကို ရောဂါပိုးတွေပျံ့မသွားအောင် ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လေရှူပေါက်ပါတဲ့ mask တွေက အခြားလူတွေ ကူးစက်မခံရအောင်ကာကွယ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ချိုးဖျက်နေပါတယ်။
Several hospitals have also echoed similar sentiments and released memos regarding the use of face masks with breathing valves. According toaFacebook post by The Medical City Clinic, “While masks with valves are designed to ease exhalation and decrease humidity for the wearer, they do not block transmission of COVID-19 because they allow exhaled air and droplets to escape.”
ဆေးရုံတွေကလည်း လေရှူပေါက်ပါတဲ့ mask တွေ အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သတိပြုစရာတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ သတိပေးနေကြပါတယ်။ “လေရှူပေါက်ပါတဲ့ mask တွေဟာ အသက်ရှူထုတ်ရာမှာ အဆင်ပြေစေပြီး ဝတ်ဆင်သူအတွက် စိုထိုင်းဆလျော့နည်းအောင် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် COVID – 19 ပျံ့နှံ့မှုကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေကို ပြင်ပကို ပျံ့နှံ့သွားစေလို့ပါ။” လို့ The Medical City Clinic က ၎င်းတို့ရဲ့ facebook မှာ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
Article originally from cosmo.com and minor revisions were done by OOTDMYANMAR.
cosmo.com တွင် ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာကို OOTDMYANMAR မှ အယ်ဒီတာများက အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
PS “Check out our latest mask design to keep you safe and stylish”
အချစ်တို့ကို ဘေးကင်းပြီး စတိုင်ကျလှပနေစေမယ့် OOTD ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် mask design တွေကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
Tags besafe, myanmar, ootdmyanmar, yangon